Graphite Electrode, eserese eserese, Graphite Ọkụ na - - Hexi
Elu Ike graphite electrode
Gulargachi Power Graphite Electrode
Graphite Electrode nkwonkwo
Block Graphite & Ihe osise
Mkpanaka Graphite & Mkpanaka Carbon
Anyị na-akwado nkà ihe ọmụma azụmahịa nke na-eduga technology, àgwà mbụ na ndị ahịa mbụ.
Ọmarịcha Ọdịmma Ngwaahịa
Hebei Hexi Carbon Co., Ltd. bụ nnukwu-ọnụ ọgụgụ otu nkwụsị enterprise na-amị graphite electrodes. Adreesị ụlọ ọrụ ya dị na Handan, obodo akụkọ ọdịbendị na ọdịnala mba na mpaghara Hebei, China. Factorylọ ọrụ ya dị na Changxiang Township, Cheng 'an County, Handan City, Province Hebei, China. Ọ na-ekpuchi ebe square mita 415,000 ma nwee ndị ọrụ 280.
Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị gụnyere Φ200mm ~ Φ1400mm powergachi ike graphite electrode, Ike dị elu na Ultra nnukwu ike graphite electrode na wdg. Oyi ...
Enwere Oghere Na Electrode Graphite ...
Ahịa graphite electrode, nke jụrụ afọ gara aga, emeela nnukwu mgbanwe na afọ a. “N'ọkara nke mbụ nke afọ, anyị nwere ihe ndị a na-enweta n'ụkọ electrode n'oge na-adịbeghị anya.” Dika ọdịiche ahịa nke afọ a bụ ihe ruru 100,000 tọn, a na-atụ anya na mmekọrịta a siri ike n'etiti ...
Usoro mmepụta Graphene
1, usoro nbibi ihe eji eme ihe bu uzo iji nweta ihe graphene site na iji esemokwu na mmeghari nke di n'etiti ihe na graphene. Usoro dị mfe iji rụọ ọrụ, graphene a na-enwetakarị na-edebekarị kristal zuru ezu. Na 2004, t ...
Mgbochi Mgbochi Ọrịa Na-achịkwa
All otu nkeji: Ugbu a, mgbochi na ịchịkwa oyi baa oria ojoo ke akwụkwọ coronavirus odụk a dị oké egwu oge. N'okpuru onye ndu siri ike nke CPC Central Committee na Comrade Xi Jinping dị ka isi, mpaghara na ụlọ ọrụ niile agbakọtawo n'ụzọ niile iji sonyere ...
Adress: Roomlọ 1305, Golden Century Business Center, No.219 Renmin East Road, congtai district, Handan City, Hebei Province, China